Qabiil, Ku Takri Falka Awoodda Dowladda Iyo Kala Xigsiga Muwaadiniinta…” Cabdiraxmaan Cabdishakuur
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah madaxda dowlada federalka inay ku kaceen eex qabiil iyo ku takri fal awoodeed.
Qoraal uu soo dhigey bartiisa Facebook ayuu Cabdiramaan Cabdishakur waxa uu ku sheegay in mas’uuliyiin ka mid ah madaxda dowlada ay si gaar ah u beegsanayaan shaqaalaha iyo saraakiil ka tirsan ciidamada kuwaasoo ka soo jeeda caasimada dalka ee Muqdisho.
Qoraalka ayaa waxaa lagu eedeeyay madax ay ka mid ahaayeen Madaxweynaha, guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Raysalwasaare ku xigeenka iyo taliyaha Nabadsugidda inay magacaabis xilal qaraabo kiil ah ay ku kaceen.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka uu soo saaray Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir.
Dhallinyaro isugu jira saraakiil ciidan, shaqaale rayid ah iyo hay’adaha garsoorka ayaa cabashadooda si is daba joog ah ii soo gaaraysay. Dhalinyaradan oo rag iyo dumarba leh ayaa u badan kuwo ka soo jeeda beelaha deegaanka Muqdisho, iyadoo xil ka qaadis iyo shaqo joojin lagu sameeyey faquuq hayb qabiil ah. Waxaa dhinaca kale si xawli ah u socda magacaabis xilal qaraabo kiil ah, taasoo ay wadaan Madaxweynaha, guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Raysalwasaare ku xigeenka iyo taliyaha Nabadsugidda (TN).
Waxaan canbaaraynaynaa eexda qabiil, ku takri falka awoodda Dowladda iyo kala xigsiga muwaadiniinta. Waxaan madaxweynaha iyo masuuliyiinta kalaba ceeb ku ah in ay kala xigsadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, kuna kacaan eexdii iyo cadaalad daradii dawladii dumisay.
Waxaa muuqata dabeecadihii lagu yaqiinay rajiim gabalkiisu dhacayo ee ahayd ha aaminin cid aan wiilkaada iyo walaalkaa ahayn.